Google Earth ပေါ်ရှိ နေရာတစ်ခု၏ အမည်နှင့် ဖော်ပြချက်ကို မည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း။
Google Earth ပေါ်ရှိ နေရာတစ်ခု၏ အမည်နှင့် ဖော်ပြချက်ကို ပြောင်းလဲနည်း
09 / 11 / 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 2
Google Earth အက်ပလီကေးရှင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကိုကြည့်ရှုပုံအား တော်လှန်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီး ကမ္ဘာကြီးသည် ၎င်းတို့၏နေအိမ်များတွင်သာ ချုပ်နှောင်ခံထားရသည်ကို မြင်တွေ့နေရသည့်အခြေအနေတွင်၊ Google Earth သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်ရာနေရာအားလုံးကို သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်စေခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကို စာသားအတိုင်း ကမ္ဘာသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PC နှင့် စမတ်ဖုန်း။ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်စစ်တပ်တည်နေရာများနှင့် အစိုးရကန့်သတ်နယ်မြေများအပြင်၊ Google Earth သည် သင့်အား ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရှုထောင့်တိုင်းကို ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အချို့သောကိစ္စများတွင်၊ ယခုတည်နေရာကို ကြည့်ရှုရန် လမ်းမြင်ကွင်းမုဒ်ကိုပင် ထည့်သွင်းပါ။ ဒါတွေအားလုံးမဟုတ်ပဲ၊ Google ဟာ 1945 ခုနှစ်လောက်အထိ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် ဆယ်စုနှစ်4ခုအတွင်း နေရာများကို အမှန်တကယ် မြင်တွေ့နိုင်သည်။ Google မှလည်း သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာမှာ ၎င်းတို့၏ဒေတာများတွင် မကိုက်ညီမှုများကို ပြင်ပေးရန် ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ မင်းပြောတာမှန်တယ်။ သင်၏ virtual adventure တွင်၊ အမည်မှားခြင်း သို့မဟုတ် သင့်လျော်သောဖော်ပြချက်မရှိသောနေရာကို သင်တွေ့ရှိသည်၊ ထိုတည်းဖြတ်မှုများကို Google ထံ အမှန်တကယ် အကြံပြုနိုင်သည်၊ ၎င်းကို တူညီကြောင်းအတည်ပြုပြီးနောက်၊ ၎င်းကို အပလီကေးရှင်းတွင်ပင် ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး ၎င်းကို ပိုမိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည် -to-date လိုင်းဆင်းအသုံးပြုသူများအတွက်။ သင်သည် ဤအရာကို ပံ့ပိုးကူညီလိုသူဖြစ်ပါက၊ ဤသင်ခန်းစာသည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
ဒီတော့ အဲဒါကို မှန်အောင်ကြည့်ရအောင်-
1 အဆင့်။ သင့် PC တွင် Google Earth အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ။
2 အဆင့်။ ရှာဖွေရေးဘားတွင်၊ သင်ရှာဖွေနေသည့်နေရာအမည်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
အဆင့် 3. ရှာဖွေမှုရလဒ်များမှ၊ သင်ပြောင်းလဲလိုသည့်နေရာကို နှိပ်ပါ။ Google Earth အပလီကေးရှင်းသည် သင့်အား တည်နေရာသို့ ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သင်အမည်ပြောင်းလိုသည့်နေရာကို ရှာဖွေရန် ယခုအခါ ၎င်းကို ဇူးမ်ချဲ့ကာ သွားလာနိုင်သည်။
ဘတ် iPhone တစ်ခုကို Mac နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း
အဆင့် 4. ကိရိယာဘားမှ 'Add Placemark' ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် 5. သင်အမည်ပြောင်းလိုသောနေရာကို ရှာပြီး ၎င်းပေါ်တွင် နေရာအမှတ်အသားကို တင်ရန် ဘယ်ဘက်နှိပ်ပါ။
6 အဆင့်။ တည်နေရာအမည်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး သင်နှင့်တူညီသောပုံများကို အပ်လုဒ်လုပ်နိုင်သည့် ဒေတာထည့်သွင်းသည့်ဝင်းဒိုးကို ယခုတွေ့ရပါမည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအချို့ရရှိစေရန် နေရာ၏ အတိုချုံး သို့မဟုတ် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်တွင် သင်ထည့်သွင်းနိုင်သည့် ဖော်ပြချက်အပိုင်းတစ်ခုလည်း ရှိပါသည်။
အဆင့် 7. သင်ကျေနပ်သည်နှင့်၊ သင်သည်ဝင်ရောက်မှုကိုအတည်ပြုရန် 'OK' ခလုတ်ကိုနှိပ်နိုင်သည်။
ဤနည်းဖြင့် သင်သည် Google Earth တွင် ယခင်က အမှတ်အသားမရှိသော နေရာများကို စတင်မှတ်သားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အပလီကေးရှင်း၏ တိကျမှုကို မြှင့်တင်ပေးရုံသာမက အခြားသူတစ်ဦးမှ ရှာဖွေသည့်အခါတိုင်း နေရာ၏ စစ်မှန်မှုကိုပါ ထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိရှိနှင့် နေရာများကို မှန်ကန်စွာ အမှတ်အသားပြုရန် သေချာစေပါ၊ မှားယွင်းသော အမှတ်အသားများသည် ပြဿနာများကို ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သော Google Earth တွင် လိုင်းဆွဲနည်း
နောက်တစ်ခု KMZ/KML ဖိုင်ကို Google Earth တွင် ထည့်သွင်းနည်း